Rahoviana no misy ny fitsaboana Coronavirus? Maninona no vetivety dia lasa mitombina ny zava-misy
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Rahoviana no misy ny fitsaboana Coronavirus? Maninona no vetivety dia lasa mitombina ny zava-misy
Rahoviana no misy vaksinin'ny COVID-19? Ahoana no fomba hitsaboana olona iray amin'ny Coronavirus? Misy fanafody manohitra ny coronavirus? Ireo no fanontaniana be mpitia indrindra tsy amin'ny Google Search coronavirus ihany.
Araka ny filazan'ny mpahay siansa, avny fihenan-tsofina manohitra ny coronavirus dia tokony andrasana haharitra 12 ka hatramin'ny 18 volana, raha milaza kosa ny mpahay siansa hafa fa misy fitsaboana haingana kokoa, hoy ny mpahay siansa.
Raha vaksinina hiadiana amin'ny coronavirus vaovao no andrasana haharitra herintaona vao hivoatra sy hosedraina, ny fitsaboana hafa momba ilay fandrahonana mahafaty dia mety ho volana vitsivitsy monja, hoy ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana.
Maherin'ny 417,721 ny olona voamarina fa voan'ny COVID-19 ary 18,605 mahery no maty. Firenena maromaro no niditra am-baravarana satria nitombo haingana ny isan'ireo tratry ny aretina mamindra be.
Ny mpahay siansa eran'izao tontolo izao dia mihazakazaka mamorona fitsaboana sy vaksiny, izay tsy maintsy iharan'ny fitsapana maro sy fitsapana ara-pitsaboana alohan'ny hifindrany amin'ny famokarana betsaka.
"Vaksiny mihoatra ny 20 no mivoatra manerantany, ary fitsaboana maro no ao anatin'ny fitsapana ara-pitsaboana," hoy ny mpitondra tenin'ny World Health Organization tamin'ny The Media Line. “Tsy mbola misy fitsaboana sy vaksinim-panafody fa ny mpikaroka eran'izao tontolo izao [dia miasa mafy].”
Raha toa ny vaksinina mety haharitra eo anelanelan'ny 12 sy 18 volana hanaporofoana fa azo antoka sy mandaitra ary vokarina hampiasaina betsaka, ny fitsaboana hafa mahomby kosa dia mety hipoitra haingana kokoa.
Profesora Peter Jay Hotez, virolojista malaza ary dekanan'ny Sekolim-pirenena momba ny fitsaboana tropikaly any Houston, Texas, dia nilaza tamin'ny The Media Line fa ny fitsaboana tany am-boalohany izay mety hiasa amin'ny COVID-19 dia ny fitsaboana antitra , izay ampidirina amin'ny marary marary ny viriosy misy olona iray izay sitrana tamin'ny otrikaretina.
Tao amin'ny fanadihadiana nivoaka tao The Gazety amin'ny areti-mifindra tamin'ny 2014, nasehon'ny mpikaroka ny fomba mety hahomby amin'ny rà mandriaka hampihena ny taham-pahafatesana raha ampiharina amin'ireo izay voan'ny aretina azo avy amin'ny taovam-pisefoana mahery vaika (SARI) taorinan'ny nisehoan'ny soritr'aretin'izy ireo.
Araka ny voalazan'i Hotez, ny fitsaboana manaraka izay hiseho aorian'io dia azo inoana fa "fanafody antivirus efa misy repurposed ao anatin'ny herinandro na volana vitsivitsy, avy eo fanafody simika vaovao ao anatin'ny herintaona, ary vaksinina ao anatin'ny iray ka hatramin'ny telo taona."
Mahaliana fa i Hotez sy ny ekipany mpahay siansa dia efa nanao vaksinin'ny coronavirus taona maro lasa izay, taorian'ny fihanaky ny SARS tamin'ny 2002-2004, izay niitatra tany Chine ary niafara tamin'ny famonoana olona mihoatra ny 770 manerantany. Saingy, rehefa tonga teo amin'ny sehatry ny fitsapana nataon'ny olombelona ny vaksinina tamin'ny 2016, dia tsy afaka nahazo famatsiam-bola bebe kokoa izy ary tsy nifarana mihitsy ireo fitsapana.
"Tamin'ny fotoana nanamboaranay azy dia tsy liana tamin'ny areti-mandringana coronavirus sy ny areti-mifindra ny olona", hoy i Hotez, ary nanampy fa ny mpikaroka dia miasa ankehitriny mba hamerenana amin'ny laoniny ny vaksinin'ny COVID-19.
Coronaviruses dia vondrona viriosy mifandraika izay miteraka aretina ao anatin'izany ny tranga sasany amin'ny sery mahazatra, fa tsy ny SARS sy COVID-19 ihany.
Dr. Rivka Abulafia-Lapid, mpampianatra zokiolona momba ny virolojia ao amin'ny oniversite Hebrew of Jerusalem, dia nifanaiky tamin'i Hotez fa mety hisy fitsaboana antivirus ao anatin'ny enim-bolana ary vetivety kokoa noho ny vaksinina, izay manakana ny fivoarana tsy ampoizina.
“Israel dia efa manana fanafody 11 samihafa hanaovana fitsarana [amin'ny marary COVID-19]… ka hiteny aho fa ny zavatra voalohany hivoahana dia ny fanafody izay nifanarahan'ny mpahay siansa eran'izao tontolo izao sy ny FDA [the US Food and Fitantanana zava-mahadomelina], arahin'ny vaksinina, ”hoy i Abulafia-Lapid tamin'ny The Media Line. "Afaka roa volana, dia hivoaka amin'ny fitsaboana amin'ny ho avy izy ireo, na angamba rongony rongony."
Abulafia-Lapid, izay nandritra ny 25 taona dia nitarika ekipa mpikaroka tany Israel natokana hamolavola vaksinim-bolo azo hamelezana ny VIH sy ireo aretina autoimmune hafa, dia nilaza fa ny vaksinina rehetra dia tsy maintsy mandalo fotoam-pitsapana lava mahatafiditra dingana maromaro amin'ny fitsapana ara-pitsaboana.
Anisan'ireo zava-mahadomelina ankehitriny noheverina ho kandidà anti-coronavirus mandritra izany fotoana izany, nanondro ny remotivir fanafody antivirus andrana ny orinasa biotech any California - andrana voalohany tamin'ny olona voan'ny virus Ebola izy - ho mpihazakazaka voalohany amin'ny fampisehoana teny fikasana. Remdesivir dia efa nampiasaina tamin'ny fitsapana ara-pitsaboana maro mifandray amin'ny coronavirus.
Teva, pharmaceutiana israeliana Teva, nandritra izany fotoana izany, dia nanambara tamin'ny herinandro lasa fa hanome doka 6 19 tapitrisa dôlida hydroxychloroquine sulfate ho an'ny hopitaly manerana an'i Etazonia izy ireo mba hikarohana bebe kokoa. Ny fanafody, izay mazàna ampiasaina amin'ny fitsaboana tazomoka, diahadihadiana ho mpirotsaka hanoherana ny COVID-XNUMX.
Mikasika ny mety hisian'ny fitsaboana serum amin'ny famonoana antibody, izay nolazain'i Hotez fa efa azo natolotra tamin'ny marary marary mafy, Abulafia-Lapid dia nanambara fa na dia mamonjy ain'olona aza ny fitsaboana toy izany, dia nisy ihany ny fanamby lehibe tamin'ny fanalavirana ity fomba ity ho an'ny olona an'arivony.
Farany, na izany aza, "be fanantenana" izy fa afaka enim-bolana miala izao fitsaboana mahomby izao tontolo izao.
"Amin'ny ho avy, tsy maintsy mivoaka isan-taona isika miaraka amin'ny vaksinim-[COVID-19] vaovao satria miovaova toy ny gripa io," hoy i Abulafia-Lapid, ary nanampy fa satria tena vaovao tokoa io virus io, dia tsy voaro ny hery fiarovan'ny olombelona ankehitriny. manohitra izany. "Tena mila mampianatra ny vatana [ny fomba hiarovan-tena amin'izany] ianao," hoy izy.